ဒူဒူကြီး: Noise and Vibration on maritime vessels (၂)
Noise and Vibration on maritime vessels (၂)
လည်ပတ်နေတဲ့ running machine တိုင်းမှာ၊ လှုပ်ရှားနေမယ့် several moving များစွာဖြင့် ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ အတွက်၊ တုန်ခါစေမယ့်သဘာဝ 'tendency to vibrate' ဟာ၊ မူလကတည်းက ရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ လည်ပတ်နေတဲ့ running machines တွေဟာ၊ မျှခြေအားလုံးတူညီနေတဲ့ equilibrium point ဆုံမှတ်တခုမှာ၊ လွဲချက်ညီစွာ oscillated movement ဖြင့်လှုပ်ရှားမှု ပေါါပေါက်နေခြင်းကို၊ တုန်ခါမှု vibration ရယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါတယ်။
သဘေ်ာကိုမောင်းနှင် ရွှေ့လျှားစေမယ့် main propulsion system အတွက်၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ main engine ကို၊ လည်ပတ်လှုပ်ရှားနေမယ့် components အစိတ်အပိုင်း အများအပြားနဲ့အတူ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီး၊ သဘေ်ာရွှေ့လျှားသွားလာနိုင်စေရန် ပမာဏကြီးမားတဲ့ tremendous amount of power စွမ်းအားကိုလည်း၊ ထုတ်ပေးပါတယ်။
internal combustion engine ဖြစ်တဲ့ diesel engine တွေ၊ မောင်းနှင်လည်ပတ်တဲ့အခါ မူလသဘာဝအတိုင်း၊ natural frequency ဖြင့် တုန်ခါမှု vibration တွေပေါါပေါက်လေ့ရှိပြီး၊ natural frequency ဟာ အကြောင်းတစုံတခုကြောင့် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အခြေအနေသို့ high levels ပမာဏဖြင့် ရောက်ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ engine ပြင်ပမှ သက်ရာက်လာမယ့် external source တွေကြောင့်၊ မူလထက် natural frequency မြင့်တက်ပြီး၊ high levels ပမာဏသို့ရောက်ရှိ သွားတတ်သလို၊ engine အတွင်းမှာ တတ်ဆင်ထားတဲ့ components တွေမှ တဆင့်၊ out-of-balance force လို့ခေါါတဲ့ alternating torques တွေသက်ရာက်ကာ၊ မူလထက် natural frequency မြင့်တက်သွားနိုင်ပါတယ်။ natural frequency မြင့်တက်သွားခြင်းကြောင့် engine အတွင်းမှ internal moving parts တွေပျက်စီးခြင်း defected and failure၊ engine ရဲ့ structure အက်ကွဲခြင်း crack၊ securing bolts တွေချောင်ထွက်သွားခြင်း loosen တို့အပြင် bearings ပျက်စီးခြင်း damaged အစရှိတဲ့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်း၊ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
သဘေ်ာတွေမှာ တတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ marine engines တွေမှာ high levels ပမာဏဖြင့်၊ သက်ရောက်လာတဲ့ တုန်ခါမှုဟာ 'torsional vibration' တခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ပဲ 'axial vibration' ကြောင့်လည်း၊ ဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။ axial vibration ဆိုတာကတော့ machinery တွေ၊ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက်တတ်ဆင် အသုံးပြုထားတဲ့ shaft သို့မဟုတ် ဝင်ရိုးတွေရဲ့ အဆက် 'couplings' တွေဟာ၊ ပုံမှန်လည်ပတ် မောင်းနှင်နေတဲ့ normal operating conditions အခြေအနေမှာ၊ လည်ပတ်မှု ဗဟိုဆုံချက်အနေအထား 'rotational center position' အနေနဲ့ co-linear အဖြစ် "ချိန်သားကိုက်စွာ တညီတညွတ်တည်း" လိုက်ပါလည်ပတ်မှု မရှိရာမှတဆင့်၊ ပေါါပေါက်လာတဲ့ တုန်ခါမှုဖြစ်ပါတယ်။
'dampers' တွေနဲ့ပက်သက်လို့ Noise and Vibration on maritime vessels (၁) မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီ post မှလည်း ဆက်လက်ဖော်ပြပါဦးမယ်။ damper ဟာ မျှခြေ အားလုံး တူညီနေတဲ့ equilibrium point ဆုံမှတ်တခုမှာ၊ လွဲချက်ညီစွာလှုပ်ရှားမှု oscillated movement ပေါါပေါက်ရာမှ ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ တုန်ခါမှု vibration ကို damp သို့မဟုတ် reduce အနေနဲ့ အရှိန်လျှော့ပေးသလို၊ တုန်ခါမှုကြာင့် engine ရဲ့ vibrating components တွေမှာပေါါပေါက်လာတဲ့ energy ကိုလည်း၊ absorbing အနေနဲ့ စုတ်ယူ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ dampers တွေဟာ 'torsional vibration' အပြင် 'axial vibration' ကိုပါ တားဆီးပေးပါတယ်။
Fig. Axial damper
axial vibration ဟာ shaft ရဲ့ forward နဲ့ aft directions တွေမှာ၊ အလျှားလိုက် oscillation အနေနဲ့ ဖြစ်ပေါါတတ်သလို၊ shaft ရဲ့ horizontal line နဲ့အပြိုင် parallel အနေအထားဖြင့်လည်း၊ oscillation ပေါါပေါက်တတ်ပါတယ်။ axial vibration အား၊ တားဆီးလျှော့ချရန် "axial damper" တွေကို crankshaft ရဲ့ ထိပ်ဖက်မှာ တတ်ဆင်ကြပါတယ်။ axial damper ရဲ့ cylindrical casing အတွင်းမှ damping flange ကို၊ crankshaft နဲ့အတူ integrated အနေနဲ့ တွဲကာ၊ နောက်ဆုံး last main bearing girder အထိုင်နေရာမှာ၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ cylindrical casing မှာ system oil ကိုဖြည့်သွင်းထားပြီး၊ axial damper ရဲ့ ဟိုဖက်ဒီဖက် both side of flanges တွေကို သေးငယ်တဲ့ small orifice မှတဆင့် system oil ပေးပို့ခြင်းဖြင့်၊ damping effect ရရှိလာပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် crankshaft မှာ axial vibration ပေါါပေါက်ခဲ့လျှင်၊ casing အတွင်းမှ system oil ဟာ၊ orifice လို့ခေါါတဲ့ throttling valve မှ တဆင့် damping flange တခုမှတခုသို့ စီးဆီးခြင်းဖြင့် 'damping effect' ကိုဖြစ်ပေါါစေတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
cylindrical casing မှ damping flanges တွေမှာ high temperature alarm နဲ့ pressure monitoring alarm sensors တွေကို၊ တတ်ဆင်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။ damping flanges တွေမှာ မူလချိန်ညှိထားတဲ့ set value ထက်လျှော့နည်းပြီး၊ oil pressure drops ကျဆင်းမှုဖြစ်ပေါါခဲ့လျှင်၊ sealing ring တွေ ပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့ အတွက်၊ သတိပေးတဲ့ alarm function ကို၊ sensor မှတဆင့် ဆောင်ရွက်ပေး ပါတယ်။
engine ရဲ့ cylinder units တွေမှတဆင့်၊ မတူညီတဲ့ uneven torque pulses တွေ ပေါါပေါက်လာပြီး၊ crankshaft ပေါါသက်ရာက်ကာ၊ ကောက်ကွေး သွားနိုင်မယ့် twisting phenomenon အနေအထား ဖြစ်ပေါါလာခြင်းကို၊ 'torsional vibration' အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ highly viscous fluid ဖြစ်တဲ့ silicon liquid အရည်၊ အသုံးပြုထားတဲ့ viscous type damper တွေဟာ၊ torsional vibration ကိုထိန်းချုပ်ရန်၊ သဘေ်ာတွေမှာ အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ dampers တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Torsional damper
inertia ring အတွင်းမှာ viscous fluid ကို၊ ပါးလွှာတဲ့ thin layer အဖြစ်၊ ထည့်သွင်းထားပြီး၊ crankshaft နဲ့အတူ လိုက်ပါလည်ပတ်နေပါတယ်။ crankcase မှာ lagging torsional motion ပေါါပေါက်လာတဲ့အခါ၊ inertia ring မှာလည်း lagging torque ပေါါပေါက်လာပါတယ်။ crankshaft လည်ပတ်တဲ့အခါ inertia ring လည်း radial direction ဖြင့်လည်ပတ်ပြီး၊ viscous fluid မှာ ဆန့်ကျင်ဖက် counter effect အနေနဲ့ damping ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ vibration အားလျှော့ချတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
'De-tuners' တွေကိုလည်း engine မှာပေါါပေါက်လာတဲ့ တုန်ခါမှု vibration ကိုလျှော့ချရန်၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ de-tuners, thrust pads နဲ့ chokes တို့ဟာ၊ engine vibration ကို သဘေ်ာရဲ့ hull သို့ လွှဲပြောင်းပေးပါတယ်။ de-tuners တွေကို side bracing de-tuner နဲ့ flexible coupling de-turner ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ side bracing တွေကို engine ရဲ့ အပေါါဖက် fitted on the top of the engine မှာ၊ တတ်ဆင်ကြပြီး၊ ပေါါပေါက်နေတဲ့ natural frequency ဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ working range ထက်ကျော်လွန်သွားတဲ့၊ အခြေအနေမျိုးနဲ့ engine တုန်ခါရာမှ ပေါါပေါက်လာတဲ့ stiffness တနည်းအားဖြင့် deformation force ကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။
engine strut လို့ခေါါတဲ့ brace တနည်းအားဖြင့် side bracing တွေဟာ၊ hydraulic သို့မဟုတ် mechanical system ကိုအသုံးပြုပြီး၊ သဘေ်ာရဲ့ hull သို့ တုန်ခါမှု vibration အား၊ ကူးပြောင်းသွားစေပါတယ်။ strut ရဲ့ ထိပ်တဖက်ကို၊ engine ရဲ့ upper part မှာတတ်ဆင်ထားပြီး၊ အခြားထိပ်တဖက်ကိုတော့ သဘေ်ာရဲ့ hull မှ၊ တောင့်တင်းမာကျောတဲ့ stiff location နေရာတခုခုမှာ၊ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။2stroke slow speed marine engines တွေမှာ၊ frictional type strut လို့ခေါါတဲ့ friction type bracing တွေကို၊ တတ်ဆင် အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။
Fig. Frictional type strut
engine မှာ ပေါါပေါက်နေတဲ့ natural frequency ဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ working range ထက်ကျော်လွန်ပြီး၊ critical အခြေအနေမျိုးရောက်ရှိသွားတဲ့အခါ၊ pads တွေအကြားမှာ friction ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ brace အနေနဲ့ ထိန်းပေးကာ၊ frequency ကို ခြေဖျက်ပေးပါတယ်။ friction material တွေဖြစ်တဲ့ pads တွေနဲ့ strut ရဲ့ အထိုင် bolts & nuts တွေကို၊ hydraulically tightened အနေနဲ့ ဖိအားပမာဏများစွာ သုံးပြီး၊ 'ကျပ်' ထားပါတယ်။ strut ရဲ့ အထိုင် stiff location နေရာတွေနဲ့ အဆက် welding seam နေရာတွေမှာ crack အနေနဲ့ အက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါါခြင်းရှိမရှိ၊ nuts တွေ loose ဖြစ်ကာ၊ ချောင်ထွက်နေခြင်းရှိမရှိ တို့ကို၊ regular inspection အနေနဲ့ ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
flexible couplings တွေကို၊ engine မှ crankshaft နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ reduction gear သို့ လည်ပတ်မှုစွမ်းအင်လွှဲပြောင်းစဉ်၊ during motion transfer မှာ ပေါါပေါက်လာတဲ့ တုန်ခါမှုအား လျှော့ချရန်၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် rotor နဲ့ pinion တို့ကြားမှ misalignment ကြောင့် axial movement ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ axial movement မှတဆင့် ပေါါပေါက်လာတဲ့ axial vibration ကို၊ လျှော့ချခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ flexible couplings တွေကို လည်ပတ်နေမယ့် crankshaft သို့မဟုတ် turbine rotor နဲ့ gearbox pinion တို့ကြားမှာ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ vibration ကိုလျှော့ချပေးမယ့် flexible element အဖြစ် spring, teeth flexible discs, သို့မဟုတ် rubber material ဖြစ်တဲ့ membranes တွေကို၊ အသုံးပြုထားပါတယ်။
Fig: membrane-type Flexible coupling
membrane-type flexible couplings တွေမှာ အဓိကအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်၊ torque tube, adapter plates နဲ့ membranes တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ လည်ပတ်ရာမှတဆင့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပေါါပေါက်လာတဲ့ အလျှားလိုက် axial နဲ့ ဒေါင်လိုက် transverse movement ရွှေ့လျှားမှုတွေကို၊ membrane plate မှ၊ အလိုက်သင့်ရယူပြီး flexing action ဖြင့် လျှော့ချပေးပါတယ်။ အကယ်၍ membrane plate ဟာ၊ failure ဖြစ်ပြီး တနည်းအားဖြင့် ပေါက်ပြဲသွားပါက၊ torque tube နဲ့ adapter plates တို့ကို၊ bolts & nuts တွေကို အသုံးပြုပြီး၊ emergency centering မှတဆင့်၊ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ကာ direct coupling အဖြစ်၊ ယာယီအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အသံဆူညံမှုနဲ့ တုန်ခါမှု noise and vibration တွေဟာ internal combustion engine ဖြစ်တဲ့ diesel engine တွေမှာ ပေါါပေါက်သလို၊ external combustion engine ဖြစ်တဲ့ steam turbines တွေနဲ့ gas turbines တွေမှာလည်း၊ ပေါါပေါက်တတ်ပါတယ်။ turbine blades တွေရဲ့ အနေအထားဟာ၊ ကောင်းမွန်နေတဲ့ perfect condition မှာရှိနေတဲ့အခါ၊ gas flow လည်းကောင်းစွာစီးဆင်းသွားနိုင်တဲ့ အတွက်၊ ချောမွေ့စွာ smooth rotation ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
Fig. eddy flow
intake နဲ့ blades တွေ ရဲ့မျက်နှာပြင် surface မှာ၊ microscopic defects လို့ခေါါတဲ့ သေးငယ်တဲ့ small pits အချိုင့်ကလေးတွေ၊ ဖြစ်ပေါါနေခဲ့လျှင် gas flow ဟာ swirling လို့ခေါါတဲ့ လိမ်ကောက်ကာ twisting သို့မဟုတ် spiraling pattern ဖြင့်၊ စီးဆင်းသွားနိုင်သလို ဆန့်ကျင်ဖက် reverse current ဖြင့်လည်း၊ စီးဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် flow ကို အနှောက်အယှက်ပေးမယ့် eddies သို့မဟုတ် turbulence တွေဖြစ်ပေါါလာခြင်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
torsional vibration ကို equidistant pulses ကိုအသုံးပြုပြီး၊ တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ induction, hall-effect, variable reluctance အစရှိတဲ့ gear tooth pickup transducers တွေနဲ့ shaft encoders တွေဟာ equidistant pulses ကို၊ ထုတ်ပေးပြီး၊ digital rpm reading သို့မဟုတ် voltage proportional to the rpm အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ၊ frequency အနေနဲ့ ဖတ်ယူပါတယ်။ အလားတူ dual-beam laser ကို perfectly aligned beams အနေနဲ့အသုံးပြုပြီး၊ reflection frequency မှတဆင့် vibration အားတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
engine တွေကထွက်လာတဲ့ exhaust gas တွေကို၊ funnel မှတဆင့်အပြင် open air သို့ စွန့်ထုတ်ရန်၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့ exhaust gas pipes တွေမှာ exhaust gas ရဲ့ အဆက်မပြတ်တွန်းထုတ်မှု pulsation ကြောင့် vibration ဆိုတဲ့ တုန်ခါမှုတွေဖြစ်ပေါါနိုင်သလို၊ exhaust gas တွေပြိုကွဲမှု break out ကြောင့် noise ဆိုတဲ့ ဆူညံမှုတွေလည်း၊ ပေါါပေါက်တတ်ပါတယ်။ exhaust gas pipes တွေကို၊ fixing and support အနေနဲ့ engine room မှ funnel အထိ ချိတ်ဆက်တတ်ဆင်ထားရာမှာ၊ pipeline တလျှေက်မှာ အသံဆူညံမှုနဲ့ တုန်ခါမှု noise and vibration တွေရှိနေပြီး၊ သဘေ်ာရဲ့ structure သို့၊ transmitted အနေနဲ့ ကူးစက်သက်ရောက်ပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့် exhaust gas pipes vibration မှတဆင့် structure borne sound အဖြစ်၊ ပေါါပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ structure borne sound ဟာ၊ exhaust gas pipes တွေကို တတ်ဆင်ထားတဲ့ connection points တွေမှ တဆင့်၊ ပေါါပေါက်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ exhaust gas pipes တွေ တတ်ဆင်ရာမှာ၊ မှန်ကန်တိကျတဲ့ fix points တွေကိုရွေးချယ်ပြီး၊၊ guides တွေနဲ့ sliding arrangements တွေအသုံးပြုကာ structure borne sound တွေကို၊ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ သဘေ်ာစတင်တည်ဆောက်တဲ့ earliest stage in ship design ကာလကတည်းက၊ exhaust gas pipes တွေရဲ့ fix points, guiding points နဲ့ sliding points တွေကို၊ structural stiffness တွေမှာ၊ မှန်ကန်တိကျစွာရွေးချယ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။
fixed points တွေဟာ pipe ရဲ့ အလေးချိန် weight နဲ့ exhaust system မှာပေါါပေါက်လာမယ့် pressure load တို့ သက်ရောက်နေမယ့် နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်၊ fixed point အဖြစ်အသုံးပြုထားတဲ့ structural stiffness ဟာ sufficiently rigid and strong အနေနဲ့ တောင့်တင်းသန်မာရန်၊ လိုအပ်ပါတယ်။ thermal expansion ကြောင့် exhaust pipe မှာပေါါပေါက်လာမယ့် လှုပ်ရှားမှုအနည်းဆုံး minimal movement အနည်းဆုံးနေရာတွေကို၊ fixed point ဖြင့် ချိတ်ဆက်မယ့် နေရာအဖြစ်၊ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ pipeline ရဲ့ direction ပြောင်းလဲသွားတဲ့နေရာတွေဟာ၊ minimal movement နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
guiding points တွေကတော့ horizontal pipelines ရဲ့ အလေးချိန် weight သက်ရောကမှုကိုသာ၊ ခံနိုင်ပြီး၊ exhaust system မှာပေါါပေါက်လာမယ့် pressure load ကိုတော့ ခံနိုင်ရည် မရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ thermal expansion ကြောင့် exhaust pipe မှာပေါါပေါက်လာမယ့် movement ဖြစ်ပေါါရာ နေရာတွေနဲ့ guiding points တွေ၊ ချိတ်ဆက်မယ့် နေရာအဖြစ်၊ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် radial movement ကို လျှော့ချရန်အတွက်သာ guiding points တွေကို ရွေးချယ်တတ်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
sliding points တွေဟာလည်း၊ horizontal pipelines ရဲ့ အလေးချိန် weight သက်ရောကမှုကိုသာ၊ ခံနိုင်ပြီး၊ exhaust system မှာပေါါပေါက်လာမယ့် pressure load ကိုတော့ ခံနိုင်ရည် မရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ thermal expansion ကြောင့် exhaust pipe မှာပေါါပေါက်လာမယ့် axial movement မရှိတဲ့နေရာတွေဟာ sliding points အဖြစ်ရွေးချယ်သင့်တဲ့ နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
exhaust gas တွေပြိုကွဲမှု break out ကြောင့် noise ဆိုတဲ့ ဆူညံမှုတွေ သဘေ်ာရဲ့ structure သို့၊ transmitted အနေနဲ့ ကူးစက်သက်ရောက်လာခြင်းကို၊ 'air borne sound' အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ thermal insulating material တွေကို exhaust pipe ရဲ့ အပြင်ဖက်မှာ လုံလောက်ထူထဲစွာ၊ ဖုံးအုပ်ပတ်ထားခြင်းဖြင့် လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
သဘေ်ာမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ machinery တွေကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ တုန်ခါမှု natural vibration တွေ တနည်းအားဖြင့် excitation တွေဟာ၊ invariably အနေနဲ့ မပြောင်းလဲပဲ၊ စည်းချက်ညီစွာ harmonic ဖြင့် ဖြစ်ပေါါနေတဲ့အတွက်၊ design ရေးဆွဲစဉ်ကတည်းက "Fourier`analysis" နည်းနဲ့ တွက်ကာ၊ ကြိုတင်လျှော့ချထားနိုင်ပါတယ်။ propeller လည်ပတ်မှု မှတဆင့် ပေါါပေါက်လာတဲ့ excitation တွေကတော့၊ cyclic perturbations အနေနဲ့ အမြဲပြောင်းလဲကာ၊ ဖြစ်ပေါါနေတတ်ပါတယ်။ propeller blade တွေမှတဆင့် cavity volumes ကို အရှိန်ဖြင့်ထွက်သွားစေပြီး၊ hull pressure ကိုလျှော့ချရန် self induced component တွေတတ်ဆင်တဲ့အခါ၊ excitation တွေမြင့်တက်လာတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် hydrodynamic excitation process ကြောင့် ship structure မှာ၊ noise and vibration တွေမြင့်တက်လာတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Reference and image credit to : Dampers & De-tuners : Reducing Vibration of Marine Engines by Karan Chopra, January 19, 2012., What isaBrace or Strut for Marine Engines ? by Mohit, August 1, 2011., http://www.marineinsight.com/, http://www.condition-monitoring.com/, http://www.machineryspaces.com/
Posted by ကိုထွန်း at 02:48